UTau uthi akazi noma usekulungele yini ukuyodlala e-Europe | News24
LAST UPDATED: 2018-11-19, 05:29
UTau uthi akazi noma usekulungele yini ukuyodlala e-Europe
Johannesburg - Umdlali weMamelodi Sundowns uPercy Tau uthi kusamjabulisa ukudlala kwiPremier Soccer League futhi akazi noma usekulungele yini ukuyodlala e-Europe, kodwa umqeqeshi uPitso Mosimane akaboni kanjalo yena.
UTau ngoLwesine uklonyeliswe ngendodo yokuba umdlali ovelele kwi-Absa Premiership Player ngenyanga kaDisemba, uMosimane wanikezwa eyokuba ngumqeqeshi ovelele, kwathi uHlompho Kekana yena waklonyeliswa ngowokushaya igoli elivelele ngoNovemba.
UTau kuningi asekwenzile selokhu aqala ukugqama kwiCAF Champions League ngo-July 2016 kodwa nakuba kunjalo, akanaso isiqiniseko sokuthi angakulungela ukuyodlala phesheya kwezilwandle.
“Sengike ngadlala kwiClub World Cup, ngayidlalela iBafana Bafana, ngadlala kwiCAF Champions League, ngakho uma nje ngikhuluma iqiniso, angicabangi ukuthi lokho kuncane kakhulu,” kusho uTau.
“Uma sibuka umsebenzi esiwenzayo, ndawonye nomqeqeshi nozakwethu, bonke bayavumelana ngokuthi usuyabonakala umehluko, kodwa ngisangenza okungcono.
OLUNYE UDABA: 'Ikilabhu yaseTurkey ifuna umdlali wePirates'
“Angazi noma i-Europe izonginikeza yini ithuba, kodwa ukuba seNingizimu Afrika kungenza ngihlale ngizama sinomqeqeshi wami. Kuningi esisebenzela kukhona – kuningi!
UTau uphethe ngokuthi ucabanga ukuthi ibhola lakuleli selisezingeni eliphezulu manje.
UMosimane ubona ngenye indlela ngodaba lokuya e-Europe, kanti uthi ufisa ngabe uTau usayingane kunalokhu ukuze ezogxila ekuzithuthukiseni.
“Ngicabanga ukuthi uPercy ufanelwe ukuba se-Europe. Ngihlala ngimtshela ukuthi isikhathi asesenaso kahle, ngifisa ngabe ngasheshe ngamthola esaneminyaka engu-20, kdwa kumfanele ukuya e-Europe,” kuqhuba 'uJingles'.